Can enjoy the treatm - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: can enjoy the treatment for the repaid part (Engels - Burmees)
There is no vaccine or specific treatment for the novel coronavirus.
နိုဗယ် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် တိကျသော ကုသမှု မရှိသေးပါ။
Remdesivir သည် နိုဗယ် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကနဦးတွင် Ebola နှင့် Marlburg ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါများကို ကုသရန်အတွက် Gilead က တီထွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် FDA ၏ လက်တွေ့စစ်ဆေးကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသေးပါ။ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေပြီး လက်တွေ့စစ်ဆေးကုသမှုအား မရရှိနိုင်သော လူနာများကိုသာလျှင် အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက် စမ်းသပ်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်သာ EUA က ခွင့်ပြုပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Chloroquine has been recommended by Chinese, South Korean and Italian health authorities for the treatment of COVID-19, although these agencies and the US CDC noted contraindications for people with heart disease or diabetes.
COVID-19 ကုသမှုအတွက် တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် အီတလီ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များမှ ကလိုရိုကွင်းဆေးကို အကြံပြုထောက်ခံထားသော်လည်း ထိုအေဂျင်စီများနှင့် US CDC သည် နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် ရောဂါနှင့်မတည့်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါသည်။
b'ဆေးဝါးပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း (ဆေးဝါးကို ပြန်လည်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ကောက်ချက်ချခြင်း၊ ပြန်လုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အနာရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းဟုလည်း သိရှိကြသည်) သည် နဂိုကဖော်ဆောင်ခဲ့သောအရာထက် မတူညီသောရောဂါ သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကို ကုသရန်အတွက် အတည်ပြုထားသောဆေးဝါးကို ပြန်လည်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါဆန်းကို တွေ့ကြုံဖူးခြင်းမရှိသောကြောင့် SARS-CoV ဗိုင်းရပ်စ် ၊ MERS-CoV ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် (ဇယား (ဇယား2).2) ပါ အခြားဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါများကဲ့သို့ အခြား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါများကို ကုသရန်အတွက် ယခင်က အသုံးပြုထားသည့် (သို့) အဆိုပြုထားသည့် ရောဂါ ကုထုံးအမျိုးမျိုးကို စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်နေစဉ် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သမားတော်များသည် COVID-19 လူနာများကို အဓိကထား ကုသစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။
Several findings suggest that rhACE2 may beapromising drug for those with intolerance to classic renin-angiotensin system inhibitors (RAS inhibitors) or in diseases where circulating angiotensin II is elevated.Infused rhACE2 has been evaluated in clinical trials for the treatment of acute respiratory distress syndrome.
rhACE2 သည် ရိုးရိုး renin-angiotensin စနစ် ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ (RAS ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ) ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသူများအတွက် သို့မဟုတ် circulating angiotensin II မြင့်တက်သည့် ရောဂါများအတွက် အလားအလာကောင်းသော ဆေးဝါးဖြစ်နိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိချက်များစွာက အကြံပြုပါသည်။ ရောစပ်ထားသော rhACE2 ကို ပြင်းထန် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ခက်ခဲခြင်း ရောဂါလက္ခဏာအစု (acute respiratory distress syndrome) ကုသမှုအတွက် ဆေးဝါးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။
open your book! (Engels>Portugees)salamat sa pag add sakin sa facbook (Tagalog>Engels)heart (Engels>Indonesisch)heenamanaya (Sinhala>Engels)cognatic descent (Engels>Tagalog)kahan gum ho gaye (Hindi>Engels)que hora vasasalir (Spaans>Engels)agba awo (Swahili>Engels)saan darating ang umaga (Tagalog>Engels)skryf sinne met die volgende woorde draai (Afrikaans>Engels)achilles heel (Engels>Tagalog)irreconcilable difference (Engels>Tagalog)provide (Engels>Swahili)senatusque (Latijn>Frans)watashi wa anata ni raian o aishi (Japans>Engels)ladies (Engels>Swahili)watashi wa anata no shigoto o aishi (Japans>Engels)wachina (Swahili>Engels)uranus (planet) (Engels>Swahili)son las dos menos diez de la tarde (Spaans>Engels)sabi ko na eh (Tagalog>Engels)chinese myl (Afrikaans>Engels)我们的救生员都很咸湿还单身的 (Chinees (Vereenvoudigd)>Maleis)palangga ko nimo (Tagalog>Engels)api caliente (Spaans>Quechua)